चीन–अमेरिका सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा कसरी पुग्यो? - Himali Patrika
चीन–अमेरिका सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा कसरी पुग्यो?
हिमाली पत्रिका १० साउन २०७७, 4:50 pm
वाशिङ्गटन (बीबीसी)। अमेरिकाले यो हप्ता चीनसँगको तनाव बढाएको छ। जासुसीको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले अमेरिकाको ह्युस्टनस्थ्ति चिनियाँ वाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने आदेश दियो।
यो अमेरिकाको पछिल्लो कदमले दुई देशहरूबीचको सम्बन्धलाई दशककै खराब तहमा पुर्याएको छ।
वाशिंगटनमा रहेका बीबीसीका संवाददाता बार्बरा प्लेट प्लेटले अमेरिका र चीनको द्व’न्द्वको कारण र यस घटनाक्रमले अमेरिका र चीनमा पर्न सक्ने प्रभाबारे बुझ्ने कोशिस गरेका छन्।
यो तनाव किन तनाव महत्त्वपूर्ण छ?
यो होइन कि अमेरिकाले पहिलो पटक कुनै पनि विदेशी मिसन रोकेको छ। तर यो एक निकै असाधारण र नाटकीय चरण हो, जुन अब फिर्ता लिन गाह्रो छ। सबैभन्दा पहिले, यो एक दूतावास हो, एक वाणिज्य दूतावास हो। त्यसकारण यसमा कुनै नीति बनाउने जिम्मेवारी छैन। तर यो व्यापार र पहुँचको कुनै पनि प्रकारको कार्यसम्पादन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका छ।
चीनले तत्काल नै अमेरिकाको यस कदमको जवाफ दिएको छ। उसले अमेरिकालाई पश्चिमी चिनियाँ शहर चेङ्लगुन रहेको उसको वाणिज्य दूतावास बन्द गर्न आदेश दिएको छ। विगत दुई महिनामा यी दुई देश बिचको सम्बन्ध बिगार्ने सबैभन्दा खराब चरण हो यो। यसमा भिसा प्रतिबन्ध, कूटनीतिक यात्राका लागि नयाँ नियम, र विदेशी संवाददाताहरुलाई देश छोड्न आग्रह गरिएको छ। दुबै मुलुकले एक अर्काको बिरूद्ध जवाफ दिए तर वर्तमान मुठभेडको पछाडि अमेरिका सबैभन्दा ठूलो कारणा हो।
यो अवस्थामा दुबै कसरी आए?
अमेरिकी प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूले ह्युस्टन वाणिज्य दूतावासलाई सबैभन्दा गम्भीर जासूस अपराधीको रूपमा चित्रण गरेका छन्। र भने कि यो सबै चिनियाँ कूटनीतिक भवनहरूमा देखिएको छ। वैदेशिक जासुसीमा प्रायः जसो जासुसको आवश्यकता पर्दछ। तर अधिकारीहरू भन्छन् कि टेक्सासको गतिविधि अप्रत्याशित रूपमा बढेको थियो र चीनलाई कडा सन्देश पठाउन आवश्यक थियो। यो सहन नसकिने किसिमको गतिविधि थियो।
यस महिनाको सुरूमा एफबीआई निर्देशकले चीनविरूद्ध निर्णायक कदम छिटै चाल्ने बताएका थिए। उनले पछिल्ला दशकमा अमेरिकी हितमा परेको चिनियाँ प्रभावको खतरामा ठूलो बृद्धि भएको बताए। उनका अनुसार चीनसँग सम्बन्धित काउन्टर इंटेलिजेंसबाट जासूसी गर्ने जोखिम सम्बन्धी हरेक १० घण्टा नयाँ अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।
चीनले संयुक्त राज्यबाट लगाइएको त्यस्ता आरोपहरुलाई निरन्तर खारेज गरिरहेको छ र ह्युस्टनको मुद्दालाई ‘द्वेषपूर्ण निन्दा’ भनेको छ।
आलोचकहरू ट्रम्प प्रशासनको यस कदमको समयलाई दृष्टिकोणबाट हेर्छन्। बराक ओबामाको कार्यकालमा, विदेश मन्त्रालयका एशिया मामिला विभागका शीर्ष अधिकारी रहेका ड्यानी रसेल भन्छन् कि यी घटनाक्रमले ध्यान हटाउन खोजेको छ।
उनीहरू भन्छन् कि आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय चुनाव अघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राजनीतिक गडबडीबाट ध्यान हटाउनका लागि प्रयास गरेका हुन सक्छन्
त्यसोभए के यो चुनावको कारणले भइरहेको छ? यस प्रश्नको उत्तर हो वा होइन हो। ‘हो’ किनभने हालसालै ट्रम्पले आफ्नो अभियानमा पूर्णतया चीन विरोधी अडान लिएका छन्। उनीहरूका रणनीतिकारहरूले यसले मतदाताहरूको ध्यान आकर्षित गर्ने विश्वास गर्छन्। उनीहरुले अब फेरी २०१६ को जस्तै ती राष्ट्रिय कुराहरु भनिरहेका छन्। अमेरिकालाई धोका दिएको चीनलाई कडा जवाफ दिनु पर्छ।
यसको साथमा, एउटा ठूलो आरोप जोडिएको छ कि चीनले कोरोना भाइरसबारे गलत जानकारी दियो। उनीहरू यो सन्देश दिन चाहन्छन कि कोविड १९ को बिग्रिएको अवस्थाको कारण चीन हो, उनीहरूको होइन।
‘होईन’ किनभने उनको प्रशासनमा पोम्पीओ जस्ता नेताहरूले लामो समयदेखि चीनको बिरूद्ध कडा कदम चाल्न र यस्तो अडान लिनका लागि माग गरिरहेका थिए। तर सुरुमा डोनाल्ड ट्रम्प दुविधामा थिए। यस सल्लाहलाई स्वीकार्ने वा उनको इच्छा अनुसार व्यापार सम्झौता गर्ने र चिनियाँ नेता शी जिनपिङसँग ‘मैत्रीपूर्ण’ सम्बन्ध राख्ने।
अमेरिकामा बढेको क्रोधले पनि आगोमा इन्धन थप्यो, जुन उनीहरु विश्वास गर्दछन् कि यो विश्वव्यापी विपत्ति चीनको भाइरसको बारेमा पारदर्शिताको अभावका कारण उत्पन्न भएको हो।
यसले अमेरिका र चीन सम्बन्धको बारेमा के भन्छ?
यस समयमा अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। सन् १९७२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन चीनको कम्युनिष्ट पार्टीसँग सामान्य सम्बन्ध निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढेका थिए, त्यस बेलादेखि ती दुई देशका बिचको सम्बन्ध सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ।
२०१३ मा जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग सत्तामा आए तब सम्बन्ध बिग्रन थाल्यो। शी जिनपिङलाई आफ्ना पहिलेका राष्ट्रपतिहरु भन्दा बढी दृढ र दबंग मानिन्छ।
हङकङमा कडा सुरक्षा कानून ल्याउँदा र चीनमा अल्पसंख्यक वीगर मुस्लिमहरूको कथित उत्पीडनको खबर आउँदा तनावलाई थप्यो। तर ट्रम्प प्रशासनसँग चीनको द्वन्द्व वैचारिक विश्व दृश्यका कारण धेरै वृद्धि भयो। यसबाट प्रभावित भएर पोम्पीओले यस हप्ता चीनको बारेमा पनि भाषण दिए।
शीत युद्धको झलक झल्काउँदै उनले चिनियाँ नेतामाथि उनीहरूको विश्वव्यापी आधिपत्य कायम राख्न तानाशाही भएको आरोप लगाए। साथै, उनले अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वलाई स्वतन्त्रता र उत्पीडनको संघर्ष भने।
चिनियाँ सरकारका धेरैजसो मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि चीनले चीनलाई रोक्न चाहान्छ ताकि यसले अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा जित्न सक्तैन। चिनियाँ सरकारका धेरै मानिसहरू अमेरिकाले चिनियाँ दूरसञ्चार टेक्नोलोजी लिन छोडेकोमा विशेष गरी रिसाएका छन्। तर त्यहाँ बढ्दो दण्डकारी चरणहरूको बारेमा चिन्ता र भ्रम पनि छ। चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले हालै अमेरिकालाई आफ्नो कदम फिर्ता लिन र दुवै देश मिलेर काम गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको बारेमा छलफल गर्न अपील गरे।
छोटो अवधिमा तनावको यो अनिश्चित अवस्था चुनाव नभएसम्म रहन सक्छ। यस्तो देखिन्छ कि चीन तनाव बढाउन चाहँदैन। र विश्लेषकहरू राष्ट्रपति ट्रम्प कुनै गम्भीर मुठभेड, अर्थात् कुनै पनि प्रकारको सैन्य टकराव चाहँदैन भन्ने विश्वास गर्छन्।
तर यस समयमा एसिया समाज नीति संस्थानका उपाध्यक्ष रसेल चेतावनी दिन्छन् कि गैर इरादाको रूपमा द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ।
उनी भन्छन्, ‘अमेरिका र चीनको सम्बन्ध बचाउने ऐतिहासिक बफरले तनाव कम गर्नुपर्दछ र मुद्दाहरूको समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने धारणा थियो तर अब ती टुंगिएका छन्।’
‘र लामो अवधिमा सबै कुरा नोभेम्बरमा कसले जित्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। तर बिडेनको सहयोगका अवसरहरूलाई पुनर्जीवित गर्न इच्छुक डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारहरूले पनि चीनसँग कडा हुने सन्देशका साथ प्रचार गरे। गर्दै छन्।’
‘यस्तो अवस्थामा कोही पनि ह्वाइट हाउसमा पुग्दैनन् तर त्यस्तो विपक्षीसँगको सहकार्यको सम्भावना कम नै देख्न सकिन्छ। हेरिटेज फाउन्डेशनको कन्जर्वेटिभ थिंकट्यांकका राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ जिम काराफानोको विश्वास छ कि चीनको ‘अस्थिरता’ को दृष्टिकोणले तनावको सट्टा स्थिरता ल्याउनेछ।
उनले बीबीसीलाई भने, ‘चीनले जहाँ हाम्रो हितको उल्लंघन गरिरहेको छ भनेर हामीले कहिलै पनि स्पष्ट रूपमा भनेका छैनौं र यसैले उनीहरूको वृद्धि भइरहेको छ।’ तर रिपब्लिकन पार्टीका नेता विलियम कोहेन, जो डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा रक्षा सचिव थिए, चीनलाई राजनीतिक क्षेत्रभन्दा परको विपक्षीको रूपमा हेर्नु खतरनाक छ भन्ने विश्वास गर्छन्। उनका अनुसार चीनले कसरी सैन्य, आर्थिक र टेक्नोलोजिकल शक्ति बढाउँदै छ, त्यसकारण भनेका छन, ‘हामी पहिले जस्तो व्यापार गर्न सक्दैनौं। तर हामीले अझै व्यापार गर्नुपर्दछ।’